( Veneer Treatment ) သွားကြွေလွှာကပ် ကုသခြင်း။ | The Grand Dental
Submitted by The Grand on9April 2019
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သွား အစစ်အမှန်ကို ဖယ်ရှားစရာမလိုပဲ ရက်ပိုင်းအတွင်း ညီညာလှပပြီး ရယ်ပြုံးလိုက်တိုင်း ပုလဲလေးတွေ စီတန်းထားသလို ထင်ပေါ်တဲ့ အပြုံးအလှပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲလို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ ထိုကဲ့သို့သော ကုသမှုကို Veneer Treatment (သွားကြွေလွှာကပ်ခြင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Type of Veneer2မျိုးရှိပါတယ်။
(1)Direct Veneer or Composite Veneer
(1) သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လေဆာဖြင့် တိုက်ရိုက်ဖြည့်ပေးတဲ့ ကုသနည်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်မြန်ဆန် ပြီးလှပတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သောင်းဂဏန်း ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။ သင့်တင့်သော ခိုင်ခံမှုလည်း ရှိပါတယ်။
????အားနည်းချက် - အရောင်ပြောင်းလဲ တတ်ခြင်း ၊ အမာ စားသောက်ခြင်း ကို ရှောင်ရခြင်း။
????အားသာချက်- လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း ၊ စရိတ်သက်သာခြင်း၊ Indirect veneer ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်။
(2) Indirect veneer or Laminated veneers or ceramic veneer
(2)သွားမျက်နှာပြင် ကို အနည်းငယ် ပြုပြင်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Composite Veneer ထက် ပိုလှပါတယ်။ ခံနိုင်စွမ်းလည်း သာလွန်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် အရောင်ပြောင်းလဲမှု လုံးဝမရှိခြင်း နှင့် ရေရှည်အတွက် လှပမှု aesthetic result များစွာ ကွာခြားပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့ ဆေးခန်း မှာ လူနာ တွေ အတွက် သင့်တော်သော သွားပုံစံကို ကုသမှု မပြုလုပ် မီ DSD official member ဆရာဝန် မှ DSD software ဖြင့် Design ဆွဲပေးပါမယ်။ ကုသမှု ပြီးလျှင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် result ကို ကြိုတင် ချက်ချင်း သိနိုင်ပါတယ်။
ပုံစံယူပြီး CAD CAM စက်ကြီးများ ဖြင့် ရရှိလာသော Custom made Veneer များကို မူလ သွားပေါ်တွင် ကော်ကပ်(Cement) ပြုလုပ် ပေးရပါတယ်။
????အားနည်းချက်- ချက်ချင်းမရနိုင်ပါဘူး၊ ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်၊
????အားသာချက်- သွားအစစ် အတိုင်းထပ်တူညီပါတယ်၊ aesthetic result အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပဲ ၊ ရေရှည်ခံပါတယ်။
ကြာချိန် - ၃ ရက်ခန့်ကြာပါတယ်။
ကုသစရိတ်- Composite Veneer ထက် ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။
ဘယ်လောက်ခံလဲ - ၂ နှစ် မှ ၁၀ နှစ်
လူနာ အနေဖြင့် Composite Veneer (Direct) နှင့် Laminated (Indirect Veneer ) ကို ခွဲခြား သိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နေရာအနှံ့အပြားရှိသူအများမှာရော ကျော်ကြားသူများစွာပါ သဘောကျပြီး ထောက်ခံမှုများ ရရှိထားတဲ့ Veneer Treatment ကို နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်ပြုလုပ်စရာ မလိုတော့ပဲ အောင်မင်္ဂလာ သွားခံတွင်း ဆေးခန်းမှာ ကုသမှု ခံယူလို့ ရပါပြီ။
အသေးစိတ် သိရှိလိုသူများကို chat box မှ ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူတိုင်းနှင့် ကုသမှု ခံယူမည့် သူများကို ဆေးခန်းရှိ ဆရာများက အခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာ အချိန်ယူ ဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုတင် စာရင်းပေးသွင်းစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ
Get the Smile you have always wanted with our services like:
- Tooth Coloured Filling
- Full Mouth Reconstruction, Dental Veneer
အလွန်မြန်ဆန် ပြီးလှပတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သောင်းဂဏန်း ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။ သင့်တင့်သော ခိုင်ခံမှုလည်း ရှိပါတယ်။ ????အားနည်းချက် - အရောင်ပြောင်းလဲ တတ်ခြင်း ၊ အမာ စားသောက်ခြင်း ကို ရှောင်ရခြင်း။ ????အားသာချက်- လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း ၊ စရိတ်သက်သာခြင်း၊ Indirect veneer ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်။ အလွန်မြန်ဆန် ပြီးလှပတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သောင်းဂဏန်း ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။ သင့်တင့်သော ခိုင်ခံမှုလည်း ရှိပါတယ်။ ????အားနည်းချက် - အရောင်ပြောင်းလဲ တတ်ခြင်း ၊ အမာ စားသောက်ခြင်း ကို ရှောင်ရခြင်း။ ????အားသာချက်- လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း ၊ စရိတ်သက်သာခြင်း၊ Indirect veneer ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်။ အလွန်မြန်ဆန် ပြီးလှပတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သောင်းဂဏန်း ဝန်းကျင်သာရှိပါတယ်။ သင့်တင့်သော ခိုင်ခံမှုလည်း ရှိပါတယ်။ ????အားနည်းချက် - အရောင်ပြောင်းလဲ တတ်ခြင်း ၊ အမာ စားသောက်ခြင်း ကို ရှောင်ရခြင်း။ ????အားသာချက်- လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း ၊ စရိတ်သက်သာခြင်း၊ Indirect veneer ပြန်ပြောင်းလို့လည်းရပါတယ်။